Shina sy ny mpamatsy Kinzon06 sy ny mpamatsy | Kinzon
Ny rafitry ny gliosida Kinzon06 dia mihazona ny orana, ny oram-panala, ny rivotra, ny vovoka ary ny vorona miala amin'ny fiparitanao nefa tsy mampihena ny habetsaky ny jiro azonao. Ny fiarovana ny rafitry ny gliosida Kinzon06 dia midika fa kely kokoa ny fotoana sy ny vola lany amin'ny fikojakojana sy fanamboarana amin'ny atiny sy ny rafitra anatiny. Ny fandalinana marobe momba ny rafitra glazing Kinzon06 dia mampiseho fa ny famoronana solika dia mampihena ny fanjifana angovo amin'ny ankapobeny. Ny rafi-pandrefesana ny fantsom-bary Kinzon06 dia mampihena ny haavon'ny tabataba hatramin'ny 50%, amin'izay dia afaka miala sasatra ao anatin'ny tranonao ianao ary matory milamina kokoa.
Rafitra glazing systeme-Kinzon06
Afaka manana toerana be loatra ve ianao? Ny rafitra glazing Kinzon06 fantsom-baravarankely dia manome anao sy ny ankohonanao efitrano fanampiny izay azonao ampiasaina amin'ny zavatra tianao. Saingy tsy izany ihany, ny rafitry ny glaseta Kinzon06 dia afaka miasa fahagagana ho an'ny karazan-trano rehetra. Ny rafitra glazing kinzon06 fantsom-baravarankely dia lasa fampiasam-bola manampy hanatsarana ny toetran'ny tranobe, raha manao ny tontolo iainana azo antoka sy manintona kokoa.
F70300 ny Kinzon06 rafitra mihazakazaka amin'ny fantsom-baravarankely dia lohataona lohataona, mampiasa ny fihodinan'ny lohataona fihetsika dia afaka mifehy ny elanelana eo anelanelan'ny fikandrana fitaratra; ny fampiasana F70400 dia fanodinana, mampiasa ny rafi-pandrefesana eccentric hanitsiana ny fandroahana teo aloha sy aorian'ny eo anelanelan'ny tontonana fitaratra.
Rafitra ara-toekarena rafitsary mihasimba balkona-Kinzon ampiasaina amin'ny karazana balbika endriny rehetra
Vidiny mora kokoa Ambany ny vidiny fa tsara ny kalitao.
POM Rollers rafitsary glazing-boasary-Kinzon mampiasa kodiarana POM sy stability slide
Hetsika famaky Ampiasao ny SS304 amin'ny famaky hinge mba ahafahana mitazona lanja lehibe, avoahy ny fikapohana fitaratra.
Takelaka fitaratra Ny halavam-baravarankely lava indrindra ho an'ny tontolon'ny fitaratra dia 700mm ary ny haavony dia 2200mm.
Fanitsiana mora: Mampiasa ny rafitry ny eccentric hanitsiana ny fandroahana teo aloha sy aorian'ny eo anelanelan'ny tontonana fitaratra
Bibikely tsy hita maso Ampiharo ny mombamomba fitaratra manokana ary ny rivets dia insides tsy hita maso
Fitaovana fifandraisana Ampiasao ny SS304 hampifandray ireo mombamomba ny làlan-kizorana mba hahazoana antoka ny fiovan'ny fifandraisan'ny fifandraisana
Fandraisana an-tsary Ny alàlan'ny Aluminium ampiasaina amin'ny alàlan'ny fitaovana 6063T5 ho an'ny mombamomba azy, ny tsiranoka dia arotsaka amin'ny spray static electroplating
Previous: Valam-baravarankely Kinzon50
Manaraka: Fitaratra fitaratra vera Kinzon35